5 Waxyaabood Oo Haweeneyda Sida Dhabta Ah Kuu Jecel Aysan Marnaba Sameyneyn - Aayaha
5 Waxyaabood Oo Haweeneyda Sida Dhabta Ah Kuu Jecel Aysan Marnaba Sameyneyn
Markii ay naag si ku jeceshahay waa inay noqotaa dhab balse side ugu sheegi kartaa inay ku jeceshahay ama aad ku ogaan kartaa inay kugu daneysaneyso, hagaag haweeney si dhab ah kuu jecel ma sameyneyso waxyaabahan soo socda.
Haddii ay si dhab ah oo kal iyo lab ah kuu jeceshahay, dhib kuma qabaeyso noloshaada waxay kuu horseedi doontaa inaad ku hogaamisid nolosha aad heysatid ugana mahad celisid dhab ahaantii inaad nolol wadaagteen iyo la joogeeda, marka adiga inaad kalsooni darro galisid ma ahane, naagta ku jecel kamala kulmmeysid kalsooni darro.
Markii ay naag si dhab ah kuu jeceshahay,ma xusuusineysid inay ku xushmeyso maxaa yeelay way ku jeceshahay, xushmadda iyadaa si dabiici ah iskaga imaaneyso, haddii ay noqoto inaad xushmad weydiisatid xaaskaaga waxaad u baahantahay inaad laba mar ka fekertid marka waxa ay noqoneysaa inaad adigana xushmeyn sidoo kale, xaaskaaga marnaba kuma xushmad dareeneyso.
Naag si dhab ah kuu jecel kuma qiyaaneyso, waqti kasta oo ay ka fekerto inay ku qiyaanto waxay xittaa dareemeysaa inay dambi gashay marba inay ku qiyaantay ma ahane inay xittaa isku dayday.
Daneysi ama isticmaal
Haweenka waa kuwo qdhagar badab muddooyinkaan si khldan ayayna kuu isticmaali karaan, wey kugu dul soconayaan weyna ilaalobayaan inaad jirtid iyo inkale marka haddii ay kula soo xiriireyso marka ay caawin u baahantahay kaliya waa inaad iska tuurtaa jaceylka aad u qabtid maxaa yeelay kuma jecla.
Naag si ku jecel mar kasta ayay kula soconee oo ay kula soo xiriiree balse ma ahan marka ay caawin kaa rabto kaliya.
Inay si xun u isticmaasho lacagtaada
Naag si maxaa kaa galay ah u isticmaasho lacagtaada sidii inaysan jirin berri ka fogoow, in si khaldan loo isticmaalo lacagtaada waa tilmaan cad oo ah inaysan ka taxadarin mustaqbalkaaga maxaa yeelay qorshe iyo danba kama lahan inay nolosha kula wadaagto, haddii ay ku jeceshahay waxay kugu dhiiri galineysaa inaad wax meel dhigatid.
Previous article5 Waxyaabood Ha Sameynin Oo Ka Fogoow Cunnada Kadib
Next article5 Qaab Oo Lagu Ogaado In Gacaliyahaaga Uu Si Dhab Ah Kuu Jecelyahay
Aayaha editor - September 1, 2019 0
Sanadkii 2017-kii oo kaliya, qiyaastii 30,000 oo haween ah ayaa ku dhintay gacanta rag ay wada joogaan ama ay horay xiriir u lahaan jireen. Haweeney...
Nin qabriga la galay lacag uu dad u hayay oo gaareysa...
4 Siyaabood Oo Muhiim Ah Oo Dib Loogu Guuleysto Kalsoonida Lamaankaaga/Lamaantaada
5 Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Haweenku Ay Qadariyaan Kuna...
11 Waxyaabood Oo Nin Kasta Uga Baahanyahay Gabadha Uu Ifka Ugu...